न्यूनतम ६० प्रतिशत मत हाम्रो पक्षमा खस्नेमा विश्वस्त छौँ : महत
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) को निर्वाचन आउन अब केही घण्टामात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा लागी सागर पाण्डे र चन्द्र रिजाल समूह वारपार भिड्दैछन् । दुवै समूहले आफ्नो निर्वाचन अभियान र प्रचारप्रसार सकिएको तथा आफूहरु चुनावी तयारीको अन्तिम चरणमा आईपुगेको बताएका छन् भने आफ्नै समूहको विजय सुनिश्चित भएको पनि दूवैको दावी छ ।
टान निर्वाचनको पूर्वसन्ध्याहमा सागर पाण्डे समूहको मूख्य सहयात्री राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट –नेपाल)का अध्यक्ष दीपक महतसँग आफ्नो समूहको चुनावी तयारीलगायतका विषयहरुको सेरोफेरोमा रहेर गन्तव्य नेपाल न्यूजका लागि सुवास भट्टले गरेको छोटो संवाद प्रस्तुत छ :
टान निर्वाचन सन्निकट आईसकेको छ, के छ तयारी ?
अहिले हामी भोलि हुन गईरहेको टान निर्वाचनका लागीे अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ । यहि तयारीस्वरुप लैनचौरमा हाम्रो विशेष भेला चलिरहेको छ । भेलामा हामीले सबै व्यवसायीहरुलाई निमन्त्रणा पठाएका छौँ । चुनावी अभियानका क्रममा हामीले भेट्न नभ्याएका÷नपाएका, हाम्रा एजेन्डाहरु बुझ्न नपाएका व्यवसायीहरुलाई यो भेलामा हाम्रा कार्ययोजनाका बारेमा स्पस्ट पार्ने प्रयास गर्दैछौँ । एउटा रमाईलो साँझको रुपमा हामीले यो भेटघाट कार्यक्रम गरेका छौँ । भोलि निर्वाचनमा हर्षोल्लासपूर्वक मतदानमा सहभागी हुन व्यवसायीहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने हेतुले यो भेला डाकिएको छ ।
भोलि हुने निर्वाचनको चुनावी परिणामको कस्तो आँकलन गर्नुभएको छ ?
चुनावी परिणामको सन्दर्भमा न्यूनतम ६० प्रतिशत मत हाम्रो पक्षमा खस्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
दुई वटा समूह निर्वाचनमा होमिएको छ । यी दुई वटै समूहले गरेका विभिन्न कार्यक्रम र अभियानमा हेर्नुभयो भने तपाइँले स्पस्ट देख्नुहुन्छ, हाम्रोमा व्यवसायीहरुको उल्लेख्य सहभागीता हुन्छ । हाम्रो समूहको हरेक कार्यक्रमहरुमा व्यवसायीहरुको ठूलो उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ, भने अर्को समूहमा मञ्चको फोटोमात्र देखिन्छ । तस्बिरै हेरेर पनि दुईको अन्तर तपाइँ खुट्याउन सक्नुहुन्छ । हामीप्रति व्यवसायीहरुको समर्थन र सहयोग देखेर हाम्रो हौसला बढेको छ ।
उदाहरणका लागि स्वतन्त्त ढंगले गरिएका मतदाता सर्वेक्षणको नतिजा हेर्दा पनि को अघि छ स्पस्ट हुन्छ । सातआठ सय जना मतदाता सहभागी एक सर्वेक्षणमा सागर पाण्डे समूह र चन्द्र रिजाल समूहको अनुपात ६५ र ३५ देखियो । हरेक पदाधिकारीमा पनि सागर पाण्डे समूह अगाडी छ ।
मैले व्यक्तिगत् रुपमा भन्ने भन्दा पनि परिस्थित आफैँ बोलेको छ ।
सागर समूहले निर्वाचन जित्ने ठोस आधारहरुचाहिँ के छन् ?
कस्ले के मुद्दा उठायो भन्दा पनि मुद्दाका संरचना कस्तो छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । पर्यटनमा मुद्दा साझा छन् । हामीले उठाए पनि र अर्को समूहले उठाए पनि मुद्दाहरु सबैको समान छन् । हाम्रो ठीक अर्कोको बेठीक भन्ने छैन् ।
मुद्दाको संरचनाको कुरा गर्दा पाण्डे समूहको मुद्दाहरु हरेक कोणबाट सही छन् । यो समूह जातिय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक सबै हिसावले समावेशी र सन्तुलित छ । यो समूहको पदाधिकारी र सदस्यहरुमा महिलाको उपस्थिति बलियो छ । विदेशमा पर्यटन विषय नै अध्ययन गरेर आएकाहरु पनि यो टीममा छन् । व्यवसायमा लामो अनुभव संगालेका व्यवसायीहरुको समृद्ध समूह हो, सागर पाण्डे समूह । पर्यटनका ‘इस्यु’ हरुलाई राम्रोसँग बुझेको समकालिन र पुराना दूवै पात्रहरु यो टीममा छन् ।
यसका अतिरिक्त यो समूह पूरापूर गैरराजनीतिक र व्यवसायीक छ । यसले भोलि कुनै निर्णय लिनुपरेको खण्डमा व्यवसाय र व्यवसायीहरुको पक्षमा निर्णय लिनेछ ।
यी यावत् सकारात्मक पक्षहरुका कारणले व्यवसायीहरुले पाण्डे नेतृत्वको टीमलाई समर्थन गर्नुभएको छ र कारणले हाम्रो जित सुनिश्चित् छ ।
तर, खासगरी रिजाल पक्षबाट टानमा नेतृत्व हस्तान्तरण भएन पुरानै नेतृत्वको पुनरावृति भयो, भन्ने खालका कुराहरु जवर्जस्त उठेको छ, पुरानै नेतृत्वको पुनरावृति किन आवश्यक देखिएको हो ?
पहिलो कुरा त पाण्डे नेतृत्वको टीम पूर्णतया पुरानो टीम होईन । १७ सदस्यीय यो टीममा जम्मा तीनजना पुरानो हुनुहुन्छ । यो पनि आवश्यकताको आधारमा समावेश गरिएको हो, यो वैज्ञानिक ढंगबाट भएको छ ।
नयाँ र पुरानोलाई ‘मर्ज’ गरेर यो टीम तयार गरिएको छ । टीममा सबै जना नयाँ भए भने संस्थाले गति पाउन सक्दैन्, उनिहरुमा संस्थालाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रयाप्त ज्ञान र अनुभव हुँदैन । यसको अर्थ सबै पुरानोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि होईन । पुरानामा अनुभव हुन्छ, नयाँमा जोस र उमंग हुन्छ । यी दुईवटाको मर्ज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावले मिश्रित टीम तयार भएको छ ।
अर्को पक्ष के छ भने एउटा उचाईमा पुगेको संस्थामा नयाँमात्र जाँदा शून्य तहबाट काम गर्नुपर्छ, यसको सट्टा पुरानालाई पनि समावेश गरियो भने जुन उचाईमा संस्गा पुगेको छ, त्यहिँबाट संस्थाले गति लिन्छ । यो कुरालाई हामीले ख्याल गरेका छौँ ।
उसो त यो समूहमा अध्यक्ष, महासचिव र प्रथम उपाध्यक्षबाहेक सबै नयाँ छन्, यो नेतृत्व हस्तान्तरण भएन भन्ने कुरा गलत छ ।